Carl Bildt oo walaac ka muujiyey xaaladda Ukraa’iina - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Maria Persson Löfgren/Sveriges Radio.
Carl Bildt oo walaac ka muujiyey xaaladda Ukraa’iina
La daabacay torsdag 23 januari 2014 kl 17.00
Magaalada Kiev waxaa lagu dilay shan, boqolaalna waa lagu dhaacay kadib markii iska hor imaad gacanta la isu la tegey uu ka dhex dhacay dad bannaanbaxaayey iyo ciidamada amniga. Wasiirka arrimaha dibedda ee Iswiidhen Carl Bildt ayaa walaac weyn ka muujiyey sida wax u dhacayaan.
- Xaalddu waa mid aad u carkagan oo ay sababtay go’aan la’aanta madaxweynaha oo ka dhalatay cadaadiska Ruushku kaga hayo in Ukraa’iina aysan hirgelin hawlaha dimoqraadiyadda iyo in aysan ku dhowaan Midowga Yurub, ayuu yiri Carl Bildt.
Bannaanbaxyadaan gadoodka ahi waxay salka ku hayaan guuldarradii ku timid heshiis wadashaqayn ah oo ay Ukraa’iina la geli lahayd Midowga Yurub.
Afhayeenka xisbiga Socialdemokraterna u qaabbilsan arrimaha siyaasadda Urban Ahlin ayaa dalbay in Midowga Yurub uusan arrintaas ka dhiidhiyin oo qura ee dhaqso mowqif looga qaato. Wuxuu Carl Bildt iyo Midowga Yurub ku dhaleeceeyey habkii ay u dhaqmeen markii uu dalka Ruushku ku cadaadiyey Ukraa’iina in ay joojiso ku dhowaanshaha Midowga Yurub. Sida ayaa loo wajahi karay.
- Waxaa habboon in dib la isugu noqdo oo la isku eedeeyo in aan la qaban wax badan oo la qaban karay si loogu qanciyo dadka Ukraa’iina faa’iidada ku jirta heshiis ganacsi ama heshiis kale oo ay Ukraa’iina la gasho Midowga Yurub.
Wasiirka arrimaha dibedda Carl Bildt oo ka hadlay xaaladda Ukraa’iina